Telephone Proof Fiber Optic Telephone Extension Mining Telephone - JWBT831, China Explosion Proof Fiber Optic Telephone Extension Mining Telephone - JWBT831 Mpanamboatra, mpamatsy, Factory - Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
Eto ianao : Home>Product>Fitrandrahana fantsom-pifandraisana>Ny fipoahana Proof Fiber Optic Telephone
Telefaona fanamafisana ny telefaona finday fanitarana finday - JWBT831
Kilasy fiarovana: IP66
Fitaovana: Alina aluminium
Loko: Mavo (namboarina)
Dimy: 343 × 294 × 206
Communication Mode： Fiber Optic
1. Fahazoana mivantana ny Ethernet, ny segment cross-network ary ny cross-route.
2. Fampandrenesana lakile nomerika, antsoy izay terminal hahafantarana ny intercom duplex (default).
3. Miantso antso any amin'ny faritra avela alalana.
4. Ny famolavolana patanty amin'ny tranga telefaona dia tsy tantera-drano, tsy misy vovoka, tsy mila fonosana tsy tantera-drano, tsara tarehy ary azo ampiharina.
5. Ny faribolana ao anaty telefaona dia mandray ny faritra iraisampirenena iraisan'ny sehatra iraisan'ny roa tonta, izay manana isa marimarina sy miantso ny asa mazava sy marin-toerana ary ny tombony hafa.
6. Fonenana alim-by alimina aliminioma, kitendry vy tsy misy fangarony, mpandray PC voaporofo amin'ny fipoahana, fork vita amin'ny firaka zinc.
7. 30W * 4 avo lenta fanamafisam-peo avo lenta, miaraka amin'ny jiro fampitandremana, feo madio ary mamirapiratra.
8. Fandraisana andraikitra mandeha ho azy, izay afaka mahatsapa ny fampielezam-peo.
9. Azonao atao ny mametraka ny laharana laharana ary mampiakatra ny masinina mba hahatsapa fa miantso mandeha ho azy.
10. Ny fanamafisana sy ny habetsaky ny sofina dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fitendry.
11. Fonenana alim-by alimina aliminioma, kitendry vy tsy misy fangarony, mpandray PC voaporofo amin'ny fipoahana, fork vita amin'ny firaka zinc.
12. Ny tampon'ilay akorany dia hafafin'ny herinaratra amin'ny hafanana ambony, miaraka amin'ny fahaizan'ny antistatika tsara sy ny fanoherana ny harafesina.
13. Ireo kojakoja ilaina amin'ny kitapom-batsy, tsorakazo mihantona ary fitendry dia novokarin'ny orinasantsika avokoa. Voafehy tsara ny fifehezana ny kalitao, ary haingana ny varotra aorian'ny fivarotana.
3-H3 / 4 "
fonosana: 1 set / carton, 13kg / baoritra
Fanaparitahana porofo an-tokotany ivelany rindrina finday tariby fibre optika ho an'ny solika sy gazy -JWBT832
Telefaon-telefaona miady amin'ny fipoahana finday mahery vaika - JWBT830